Tartan iyo Tacliin oo socda iyo iskuulada Al-Najax Bosaso iyo Nugaal Garoowe oo xalayto guuleystay – Radio Daljir
Luulyo 17, 2013 5:48 b 1
Boosaso, July 17- 2013 – Tartan iyo Tacliin wareegiisa koowaad ayaa weli ka socda idaacada Radio Daljir, waxaana habeenimadii xalayto ahayd fooda is daray oo kulan aqooneed xiiso badan yeeshay afar ka mid ah dugsiyada sare ee deeganada Puntland.
Tartanka xalayto oo ahaa labba qeybood ayaa waxaa wareegii hore ku tartamay, Al-Nuur Secondary oo ku yaala Badhan iyo Nugaal Secondary oo ku yaala magaalada Garoowe, kulankaasi ayaa si xiiso leh ku soo dhamaaday, ?waxaana natiijada ku dhawaaqay guddiga.
? Kulanka Nugaal iyo Al-nuur wuxuu ahaa mid anshax badan, natiijadu waa, ?Al-nuur waxay ka jawaabeen Afar su?aalood, waxaa dhaaftay labbo, sidoo kale Nugaal waxay ka jawaabeen shan su?aalood, waxayna ka faa?iideysteen hal ka faa?iideysi taas oo ka dhigan, in ay Nugaal heshay 11 derajo, halka Al-Nuur ay helaan 9-Derajo.? Ayuu yiri Maxamed Cali oo ka mid ah guddiga Tartan iyo Taclin.
Qeybtii dambe ee tartanka ayaa waxaa is arkay iskuulka sare ee Al-Najax Bosaso iyo iskuulka sare ee Al-Nawaawi ee magaalada Qardho, waxaana kulankaasi oo isna ahaa mid xiiso gaar ah leh? dhibcihii guusha ay raaceen dugsiga sare ee Al-Najax Bosaso oo ka jawaabay dhamaan su?aalihii ay xaqa u lahaayeen, halka Al-nawaawi ay hal su?aal baal mareen.
Tartan iyo Tacliin weli wuxuu ka socdaa Radio Daljir, wuxuuna socon doonaa inta ka dhiman bisha Barakaysan ee Rammadaan, waxaana sanadkaan ka qeyb gelaya 24 ka mid ah dugsiyada sare ee Puntland, iyadoo ay ?baahiso Radio Daljir oo taageero ka hesha Wasaarada waxbarashada ee Puntland, dallada PEN iyo shirkada isgaarsiinta ee Golis.